Puntland oo laga Samaynayo Roob Doon Isniinta – Radio Daljir
Oktoobar 10, 2015 5:41 b 0
Sabti, Oktoobar 10, 2015 (Daljir) —Wasaaradda Cadaalada Arimaha diinta iyo Dhaqan celinta Puntland ayaa Maanta shaacisay in maalinka Isniinta la qaban doono Roob doon alle looga baryayo inuu roob khayr qaba uu siiyo umadiisa.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Cadaalada ahna kusimaha wasiirka Maxamed Faarax Aadan iyo Shiikh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda Cadaalada ee Garowe ayaa sheegay in maalinka Isniinta ee soo socota loo iclaamiyey in la qabto Roob doon.
Maxamed Faarax Wasiir ku xigeenka wasaarada Cadaalada oo isagu ku dhawaaqay in maalina Isniinta la Roob dooni doono ayaa sheegay in culimada iyo masuuliyiinta wasaaraddu ay isla garteen maalinka isniinta loo baxo Roob doon.
Wuxuu sheegay in laga roob dooni doono dhamaan deegaanada Puntland,isagoo ugu baaqay shacab Reer Puntland inay maalinka ka qayb galaan roob doonta oo niyad saafiya alle ku baryaan.
Shiikh Maxamuud Xaaji Yuusuf ayaa isna ku booriyey dadka inay dhamaantood ka qayb galaan maalinka Roob doono,waxaa uuna sheegay inay tahay Sunne,isagoo ka waramay fadliga ay leedahay maalinka Roob doonta.
Roob doonta ay ku dhawaaqday Wasaaradda Cadaalada Puntland ayaa kusoo aaday xili maalmahan kulayl laga dareemayey magaalooyinka waaweyn ee Puntland,waxaana jira abaar haysata dadka reer guuraaga ah, inkasto cirku uu umuuqdo mid curanraba.
Madaxweyne Gaas oo Kenya ka soo laabtay